By လဖိုင်3July 2012
ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့ ဂျန်မိုင်ကောင့် စစ်ပြေးဒုက္ခသည်စခန်းတွင် လာရောက်ခိုလှုံနေသည့် စစ်ပြေးဒုက္ခသည် ကချင်အမျိုးသား ကိုလထော် ဘရန်ရှောင်အား ကချင်လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (KIA) မှဟု စွပ်စွဲကာ ဖမ်းဆီးထားခြင်းမှ လွှတ်ပေးရန် မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် ဇူလိုင်လ ၆ ရက်နေ့၌ ဆန္ဒပြရန် စီစဉ်နေကြောင်း သိရသည်။
ဆန္ဒပြမည့် စီစဉ်ထားသည့် ထိုနေ့သည် အဖမ်းခံထားရသည့် ကိုဘရန်ရှောင်ကို ရုံးထုတ်မည့်နေ့ ဖြစ်သည်။
“ဒီကိစ္စက ဘရန်ရှောင် တယောက်တည်းကိစ္စ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒုက္ခသည်တွေအားလုံးရဲ့ လုံခြုံရေးနဲ့ ဆိုင်ပါတယ်။ အခုဆို ဒုက္ခသည်တွေ ကြောက်ကြောက်လန့်လန့် နေနေရပါပြီ။ လုံခြုံမူ လုံးဝမရှိတော့ဘူးလို့ ခံစားနေရပါတယ်” ဟု ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန် အသင်းချုပ် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာ Rev. ခလမ် ဆမ်ဆွန်က ပြောသည်။
ဇွန်လ ၂၉ ရက်နေ့တွင် ကချင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်ထံသို့ ငြိမ်းချမ်းစွာ စီတန်းလှည့်လည် ဆန္ဒပြခွင့်ရရန် စာတင်ထားကြောင်း၊ ကိုဘရန်ရှောင်ကို ချွင်းချက်မရှိ လွှတ်ပေးရန်၊ ဒုက္ခသည်စခန်းများသို့ ဝင်ရောက်ရှာဖွေ ဖမ်းဆီးခြင်း မပြုရန်၊ ဒုက္ခသည်များ လုံခြုံစွာနေနိုင်ရေး အစိုးရက ကူညီပေးရန်၊ ဦးဘရန်ရှောင်ကို နှိပ်စက်မှု မပြုလုပ်ရန်အတွက် ဆန္ဒဖော်ထုတ်လိုသည်ဟု ကချင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်ထံ တင်ထားသည့် စာတွင် ဖော်ပြထားကြောင်း သိရသည်။
ဒေါက်တာ Rev. ခလမ် ဆမ်ဆွန်က “အဖမ်းခံရတဲ့ ဘရန်ရှောင်ဆိုတာ KIA လုံး၀ မဟုတ်ပါဘူး။ မိုင်းမပြောနဲ့ မီးခြစ်တောင် မရှိဘူး။ ဆေးလိပ်လည်း မသောက်တတ်ဘူး” ဟု ပြောသည်။
အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ် ကိုဘရန်ရှောင်သည် မြန်မာစကား ရေလည်စွာ နားလည်ခြင်းမရှိဘဲ နားထိုင်းသူဖြစ်သည်ဟု ကချင်ဒုက္ခသည်များက ပြောသည်။
ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်နေ့ထုတ် ရတနာပုံသတင်းစာနှင့် မြဝတီသတင်းစာတို့တွင် ကိုဘရန်ရှောင်ကို KIA မှ ဗိုလ်ကြီး အဆင့်ရှိသူဖြစ်ကြောင်း၊ ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးမှုများနှင့် ဆက်စပ်နေကြောင်း၊ ဖမ်းဆီးထားသူများမှာ ဘရန်ရှောင်အပြင် လဖိုင်ဝမ်၊ ဇော်ဘောက်၊ ဘရန်ရုန်းတို့ဖြစ်ကြောင်း ရေးသားဖော်ပြထားသည်။
ကိုဘရန်ရှောင်ကဲ့သို့ စွပ်စွဲဖမ်းဆီးခံရကာ ထောင်ဒဏ်ကျခံရသူများလည်း ရှိကြောင်း သိရသည်။
“ရွေစက်စခန်းက တယောက်က ဟုတ်ပါတယ်လို့ ဝန်ခံလိုက်လို့ ထောင်ကျနေပြီ” ဟု ဒေါက်တာ Rev. ခလမ် ဆမ်ဆွန်က ပြောသည်။
စခန်းပြင်ပတွင် ဖမ်းခံရသူများအတွက် ယခုကဲ့သို့ လိုက်လံဆောင်ရွက်ပေးမူများ ရှိခဲ့သော်လည်း ယခုအကြိမ်သည် ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန် အသင်းချုပ် ကြည့်ရှုမူအောက်တွင်ရှိသည့် စခန်းတွင်း၌ဖြစ်၍ အပြည့်အ၀ တာဝန်ခံ၊ အာမခံကာ ဆောင်ရွက်ရခြင်းဖြစ်သည်ဟု ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
ကိုဘရန်ရှောင် အဖမ်းခံရပြီးနောက် ဒုက္ခသည်စခန်းမှ စွန့်ခွာထွက်ပြေးသည့် မိသားစု ၄ စုရှိနေပြီဟု သိရသည်။
ဇွန်လ ၁၇ ရက်နေ့ နံနက် ၉ နာရီတွင် မြစ်ကြီးနားမြို့ အမှတ် (၁) ရဲစခန်းမှ စခန်းမှူးနှင့် စရဖတို့က ဖောက်ခွဲရေးဆိုင်ရာ ပုဒ်မ ပေါက်ကွဲ ၃ ဖြင့် ဖမ်းဆီးသွားပြီး ရုံးတင်သည့်အခါတွင် မတရားအသင်းနှင့် ဆက်သွယ်မှု ၁၇/၁ ဖြင့် ပြောင်းလဲ စွဲဆိုခဲ့သည်။
ဖမ်းဆီးခံရပြီး ၂ ရက်အကြာ ဇွန်လ ၁၉ ရက်နေ့တွင် ဒုက္ခသည်စခန်းသို့ လက်နောက်ပြန် လက်ထိပ်ခတ်ကာ ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ကြောင်း၊ မျက်နှာတွင် ဖူးယောင်းနေသည်ကို ကိုဘရန်ရှောင်၏ ဇနီးဖြစ်သူက မြင်ရပြီးနောက် မေ့လဲသွားခဲ့ကြောင်း စခန်းတာဝန်ခံက ပြောသည်။
ဇွန်လ ၂၀ ရက်နေ့တွင် စခန်းသို့ နောက်တကြိမ်ခေါ်လာခဲ့ပြီး ၎င်းအိပ်သည့်နေရာနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်နေရာများကို သရုပ်ပြဗီဒီယို ရိုက်ကူးခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဇွန်လ ၂၉ ရက်နေ့ နေ့စွဲဖြင့် သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များသို့ ကိုဘရန်ရှောင်၏ ရှေ့နေ ဦးဂျီမာခါးက ပေးပို့သော စာတွင် ၎င်းအနေဖြင့် ရှေ့နေကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာနှင့် ကိုဘရန်ရှောင်ကို တွေ့ဆုံခွင့် အကြိမ်ကြိမ်တောင်းသော်လည်း တွေ့ဆုံခွင့် မပြုကြောင်း၊ ဇွန်လ ၂၈ ရက်နေ့ ဦးဘရန်ရှောင်အား ရုံးထုတ်ချိန်တွင် နှိပ်စက်ခံထားရသည့် လက္ခဏာများ တွေ့ရကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
ဇူလိုင်လ ၂ ရက်နေ့ညနေတွင် ရှေ့နေ ဦးဂျီမာခါးနှင့် စခန်းတာဝန်ခံတို့သာ ကိုဘရန်ရှောင်ကို တွေ့ဆုံခွင့်ရကြောင်း သိရသည်။
ဖမ်းခံရသည့် ၁၇ ရက်မှ ၂၈ ရက်နေ့ရုံးထုတ်သည့် အချိန်အထိ မိသားစု၊ ရှေ့နေများနှင့် တွေ့ဆုံခွင့် မရဘဲ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ရုံးထုတ်ကာ ဖြောင့်ချက်ပေးခိုင်းကြောင်း၊ ဖြောင့်ချက်ပေးစဉ် တရားသူကြီးက မျက်နှာမှ ဒဏ်ရာများအပြင် ရင်ဘတ်တွင် တပ်ဆင်ထားသည့် အသံဖမ်းစက်ကို တွေ့မြင်သွားသည့်အတွက် ရုံးထုတ်စစ်ဆေးမှု ရပ်ဆိုင်းခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
“တရားသူကြီးက မျက်နှာမှာ ဒဏ်ရာတွေနဲ့ ဘာဖြစ်တာလဲလို့ မေးတဲ့အခါကျတော့ ဆိုင်ကယ်မှောက်တာလို့ ဘရန်ရှောင်က ဖြေတယ်။ ဒါနဲ့မယုံလို့ အကျႌချွတ်ခိုင်းတဲ့အခါတော့ စရဖတွေရဲ့ အသံဖမ်းစက်ကို တွေ့သွားတော့ တရားရုံးကို စော်ကားတယ်ဆိုပြီး တရားသူကြီးက တရားခွင်ကို ရပ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ဒီကိစ္စကိုလည်း အထက်ကို ထပ်တိုင်ထားတယ်” ဟု ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေး အကျိုးဆောင်တဦးဖြစ်သူ ဦးလမိုင်ဂွမ်ဂျာက ပြောသည်။
ဘရန်ရှောင်သည် KIA မဟုတ်ဟု ကချင်နှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန်အသင်းချုပ်မှ သာသနာပိုင်ဆရာ ၄၈ ဦးက ဇွန်လ ၂၂ ရက်နေ့တွင် စာရေးသား လက်မှတ်ထိုးကာ ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် သမ္မတတို့ထံ ဖြေရှင်းခဲ့သော်လည်း တစုံတရာ အကြောင်းထူးခြင်း မရှိဟု သိရှိရသည်။
ဒုက္ခသည်ကို KIA အဖြစ် အမည်တပ်ဖမ်းဆီးခြင်းသည် လက်ရှိဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို များစွာထိခိုက်နိုင်သဖြင့် အမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးရန် ကချင်ငြိ်မ်းချမ်းရေးအကျိုးဆောင်များက တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်း ဦးလမိုင်ဂွမ်ဂျာက ဆိုသည်။
KIA ဟု စွပ်စွဲ ဖမ်းဆီးခံရသည် ကိုဘရန်ရှောင်သည် ၂၀၁၁ ဇူလိုင်လ ဂျန်မိုင်ကောင့် စစ်ပြေးဒုက္ခသည်စခန်း ဖွင့်စဉ်ကတည်းက ဒုက္ခသည်စာရင်းပေးသွင်းကာ နေထိုင်နေသူဖြစ်ကြောင်း ဇနီးနှင့် သမီးနှစ်ဦးရှိကြောင်း၊ လက်ရှိတွင် အစိုးရတပ်နှင့် KIA အကြား တိုက်ပွဲများ ဖြစ်နေသည့် အင်ပွန်ကျေးရွာမှဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။